घर बनाइसक्नुभयो ? अब यसरी लिनुस् निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र
घर बनाइसक्नुभयो ? बनाइसक्नुभएकाे भए अब बिनाझन्झट घर निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र महानगर वा नगरपालिकाबाट लिन छुटाउनु हुन्न । तपाईंले घर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुभएकाे छ भने बिनाझन्झट त्यस्ताे प्रमाणपत्र लिनका लागि तपाईंलाई याे समाचार सहयाेगी बन्न सक्छ ।
यदि तपाईंले महानगर वा नगरपालिकाबाट घर निर्माण गर्ने इजाजत लिएर घर बनाइसक्नुभएको छ भने तपाईंले जरिवानाबाट बच्न तुरुन्तै घर सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । सम्पन्नको प्रमाणपत्रबिना तपाईंले भवन धिताेमा राखेर बैंकिङ कारोबार गर्न पाउनु हुन्न । योसँगै घर खरिदबिक्री पनि गर्न पाउनु हुन्न । त्यसैले तपाईंले घर बनाइसक्नुभएको छ भने सम्पन्नकाे प्रमाणपत्र लिन ढिलाइ नगर्नुस् ।
घर निर्माण सम्पन्नकाे प्रमाणपत्रका लागि आवश्यक कागजात
१. नक्सा पासको फोटोकपी- १ प्रति
२. जग्गाको लालपुर्जाको फोटोकपी- १ प्रति
३. भवन निर्माण इजाजतपत्रको फोटोकपी- १ प्रति
४. डिजाइनरको सिफारिसपत्र- १ प्रति
५. डिजाइनरको इजाजतपत्र- १ प्रति
६. मालपोत तिरेको रसिद फोटोकपी- १ प्रति
७. घरको फोटो- २ प्रति
८. जग्गाधनीको व्यक्तिगत फोटो- २ प्रति
९. वडा कार्यालयको सिफारिसपत्र- १ प्रति
महानगरपालिका तथा नगरपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड, भवन इजाजत तथा घर नक्सापास कार्यविधि २०७५, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ आदिका अधारमा भवन निर्माण मापदण्ड र आवश्यक कागजात तोकिएको हुन्छ । सोहीबमोजिम सेवाग्राहीले कागजात तयार पार्नुपर्ने हुन्छ ।
यी कागजात तयार पारेपछि वडाको सिफारिससमेत संलग्न गरेर माहनगरपालिका अथवा नगरपालिकामा आवेदन दिनुपर्छ । यसरी आवेदन दिएको अथवा सम्पन्नको प्रक्रिया सुरु भएको १० दिनभित्र तपाईंले घर सम्पन्नको प्रमाणपत्र पाउनु हुनेछ ।
स्रोत : भवन निर्माण मापदण्ड, भवन इजाजत तथा घर नक्सापास कार्यविधि २०७५
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ५, २०७७, १४:४९:००